Igbo, John: Lesson 105 - Jizọs rịọrọ ka e mee ka chọọchị dịrị n'otu (Jọn 17:20-26) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 105 (Jesus intercedes for the church's unity)
4. Jizọs rịọrọ ka e mee ka chọọchị dịrị n'otu (Jọn 17:20-26)
24 Nna, anamachọ ka ndi Gi onwe-gi nyem nọyerem ebe M'nọ, ka ha we hu ebubem, nke I nyeworom: n'ihi na I hurum n'anya mb͕e akātọghi ntọ-ala uwa.
Ugboro isii n'ekpere nke Nnukwu Onye Nchụàjà Jizọs kpọrọ Chineke "Nna", otu ugboro "Ezi Chineke". Site aha a pụrụ iche o gosipụtara ntụkwasị obi ya na agụụ maka Chineke. N'ihi na ya na Nna ya nọ n'eziokwu, ma o mere onwe ya ka ọ bụrụ onye dị umeala n'obi ma dị umeala n'obi maka mgbapụta anyị. Ọ chọghị ịbụ onye a ma ama ma ọ bụ nwee ihe.
Oge iri na atọ o ji okwu ahụ bụ "I nyewo m". Ọkpara ahụ were ụmụ mmadụ, ndị na-eso ụzọ ya, ọrụ na ikike ya bụ onyinye si n'aka Chineke, dịka a ga-asị na ha abụghịrịrị ya. O rubere isi na ebube Nna ya n'oge niile. Ndị umeala n'obi a na-enwe nkwekọrịta na-aga n'ihu, ka Ọkpara wee mezuo echiche na nzube Nna kpamkpam.
N'ihi nrube isi zuru oke a, o nwere ike ikwu n'ekpere n'emeghi uche, "Achọrọ m." Ya mere, olee ọchịchọ nke Ọkpara Chineke? Ọ bụ na ndị na-eso ụzọ ya n'oge na ohere ga-anọnyere ya ebe ọ nọ. Ya mere, Pol na-agba akaebe na a kpogidere Ya n'obe ma soro ya lie ya ka o keta oke ya, wee biri n'oche ya n'eluigwe, iji chọpụta akụ nke amara amara nke Chineke site n'ịdị nwayọọ nke Kraịst Jizọs (Ndị Rom 6:1-11; Ndi Efesos 2:4-7).
Udidi ayi na Kraist karia ikere ya nhuta na ihu ya n'anya, ya na ebube ya. Ọ na-achọ ka anyị hụ otuto ya ma bie na mkpakọrịta ya ruo mgbe ebighị ebi. Ndịozi ahụ maara ihe mgbaru ọsọ a bụ olileanya anyị. Anyị ga-aṅụrị ọṅụ ọṅụ ebighi ebi mgbe a na-ahụ ya. Anyị ga-atụgharịkwa ebube ya, gbanwee ya n'ọdịdị ya, n'ihi na a na-enye anyị ntụgharị ihu nke ịhụnanya Chineke n'ime obi anyị (Ndị Rom 5:5 na 8:29). O nyere otuto ya, ebe ọ bụ na ọ dị ebube n'agbanyeghị na ọ dị obere. Ndi ozi ah h ta n'iru ya na otuto ya sitere n'ih n'anya di icheiche di n'etiti ya na Nna nke bia tuputa nto ala nke wa. Ndụ a dị n'Atọ n'Ime Otu dị nsọ bụ isi iyi nke mgbapụta anyị.
25 Nna Nke bu ezi omume, uwa amaghi Gi, ma Mu onwem mara Gi; ndia we mara na Gi onwe-gi ziterem.
Chineke nọgidere bụrụ onye ezi omume na onye ziri ezi, ọ bụrụgodị na ụwa amaghị. N'ihe dị mkpa, Ọ dị nsọ, ọchịchịrị adịghịkwa n'ime Ya. Onye ọ bụla nke hụrụ ịhụnanya Ya nime Kraịst ghọtara na ọ bụghị Ya kpatara na ụmụ mmadụ adịghị ekwere na Ọkpara ahụ ma ọ bụ nweta nzọpụta.
Ma Kraịst matara Nna ya site na mgbe ebighi ebi n'ihi na Ọkpara ahụ hụrụ Nna ya ihu na ihu. Àgwà ya bụ àgwà ọma na aha ndị Ọkpara ya maara. Akụkụ ndị miri emi nke chi adịghị ezobe ya.
Nye ndị niile natara Ọkpara, Chineke na-enye ha ohere ịghọ ụmụ Ya. Jizos mere ka ha mara ihe nzuzo nke nna nke Chineke. Ndị na-achịkwa na-aghọta na Kraịst sitere n'aka Chineke; ọ bụghị nanị onye amụma ma ọ bụ onyeozi, kama n'ezie Ọkpara Chineke. Omuma zuru oke nke di nime ya di nime ya. Mmụọ ahụ na-enwu anyị ịchọta chi nke Jizọs n'ime ụmụ mmadụ, ka anyị na ya na Nna ya zitere ya. Ya mere, ọ bụ njikọ dị n'etiti Chineke otu nwoke.
26 Emewo m ka ha mara aha gị, m ga-emekwa ka a mara ya; ka ihu-n'anya nke i huru n'anya we di nime ha, mu onwem kwa nime ha.
Na nkenke, Kraịst kụziiri anyị mkpughe nke aha Nna. Ihe ngosi kachasị oke nke a bụ n'obe, ebe Nna ahụ chụrụ Ọkpara Ya n'àjà, onye dị nsọ, ka anyị nwee ike ịkekọrịta ikike nke Ịbụ. Mgbe Mmụọ Nsọ dakwasịrị anyị, anyị tiri mkpu, "Abba, Nna" site na omimi nke obi anyị. Ekpere Onyenwe Anyị bụ okpueze nke ekpere niile, dị ka ọ na-asọpụrụ Nna, Alaeze Ya na uche Ya.
Anyị na-amata Nna nke Onyenwe anyị Jizọs Kraịst ruo n'ókè nke na a wụkwasịrị anyị ịhụnanya na-adị n'etiti Nna na Ọkpara. Ọ rịọrọ Nna ya ka o mepụta ịhụnanya zuru oke n'ime anyị. Ọ bụghị naanị Nna ahụ na-abịakwute anyị, kama Jizọs bụ onye chọrọ n'onwe ya na anyị. Ya mere, o kpere ekpere ka o mezuo ka chi nke chi wee dakwasi anyi, dika John kwuputara na akwukwo ozi ya: Chineke bu ihu n'anya, onye obula nke nogide na ihu-n'anya nogide nime Chineke, Chineke na ya.
Gịnị bụ nchịkọta nke ekpere nnukwu ekpere nke Jizọs kwuru?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:44 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)